गीतकार शेर्पाको गीति एल्बम् ‘दुई नयन’ सार्वजनिक
काठमाडौं । अमेरिका बस्दै आएका गीतकार लाक्पा डेण्डी शेर्पाको गीति एल्बम् ‘दुई नयन’ सार्वजनिक भएको छ ।
‘दुई नयन’को काठमाडौंमा एक समारोहबीच बरिष्ठ गीतकार डा. कृष्णहरि बराल र संगीतकार शक्ति बल्लभले संयुक्तरुपमा सार्वजनकि गरेका थिए । एल्बम सार्वजनिक गर्दै गीतकार डा. बरालले भने, ‘गीतकार शेर्पाका गीतहरु मन छुने छन् ।’ उनले एल्बममा समावेश राष्ट्रिय गीतले आफ्नो मन छोएको बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संगीतकार बल्लभले विदेशमा रहेर पनि नेपाली गीत लेखनमा शेर्पाले देखाएको मोहलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गीतकार शेर्पाले प्रदेशमा बसेर पनि आफूलाई नेपाली गीतसंगीतमा उभ्याएका छन् । यो समग्र नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रका लागि सकरात्मक कुरा हो।’
गीतकार शेर्पाले आफ्ना दुई छोरीमा समर्पित गर्दै एल्बमको नाम ‘दुई नयन’ जुराएको जनाएका छन् । आफ्ना छोरीहरु आँखाको नानीजस्तै भएकाले आफ्नो पहिलो सांगीतिक कोशेलीलाई ‘दुई नयन’ नामांकन गरेको उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक एल्बममा बुद्धले परिनिर्माणु, स्वच्छ आकाश, उठौँ वीरका सन्तती, म त अस्मिता लुटिएकी, (केटा केटी भर्सनमा छ) र माथि है साल्पा लेकैमाु बोलका गीत रहेका छन् । जसमा जगदिश समाल, यशोदा तिमिल्सिना, विष्णु अधिकारी, गणेश पराजुली, यम बराल, डोमा शेर्पा, एपी शेर्पा र मेलिना राईको स्वर रहेको छ भने संगीत ओम कर्माचार्य, सन्तोष श्रेष्ठ, गणेश पराजुलीलगायतको छ ।